Armature: Mgbatị Wireframing Maka onye na-ese foto CC / CS5 + | Martech Zone
Ọtụtụ n'ime ndị enyi m na ụlọ ọrụ ahụ ejirila ihe ngosi ma Armature abịala - ndọtị $ 24 maka Adobe Illustrator. Armature nwere nchịkọta ihe maka echiche nke ngwa weebụ, ngwa mkpanaaka, yana saịtị weebụ maka ịdọrọ na dobe ntinye waya.
Kedu ihe bụ waya waya? Dabere na Wikipedia:
Igwe ihe ntanetị nke ebe nrụọrụ weebụ, nke a makwaara dị ka atụmatụ nke ihu igwe ma ọ bụ na ihuenyo, bụ ihe ngosi a na-ahụ anya nke na-anọchite anya usoro ọkpụkpụ nke weebụsaịtị. A na-emepụta waya maka nzube nke ịhazi ihe iji mezuo otu nzube. Ebumnuche a na-ekwukarị site na ebumnuche azụmaahịa na echiche okike. Igwe waya ahụ na-egosipụta nhazi peeji ma ọ bụ nhazi nke ọdịnaya weebụsaịtị, gụnyere ihe ndị nwere interface na usoro ịnyagharị, yana otu ha si arụkọ ọrụ ọnụ. Igwe waya anaghị enwekarị ụdị mkpụrụedemede ederede, agba, ma ọ bụ eserese, ebe ọ bụ na isi elekwasị anya na arụmọrụ, omume, na mkpa nke ọdịnaya.
Tags: Adobeonye ihe ngosiwayandọtị waya wayawayaframing